सर्वश्रेष्ठ टीमभियर विकल्प तपाईले प्रयास गर्नु पर्छ (२०२०) - सफ्टवेयर
TeamViewer सबै भन्दा राम्रो रिमोट डेस्कटप सफ्टवेयर हो जुन तपाइँलाई टाढाबाट बहु कार्यस्थानको साथ जडान गर्न मद्दत गर्दछ। असुरक्षित र फिनिकी हुन प्रयोग गरिएका कुनै पनि टाढाको उपकरणसँग जडान गर्दा अब गएका छन्। यो सफ्टवेयरले टाढा टाढा कम्प्युटर पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।
यसको विस्तृत सुविधाहरू र कार्यक्षमताहरूले तपाईंलाई हार्डवेयर छवि प्रसंस्करणको गतिमा रिमोट कन्ट्रोल प्रदर्शन बढाउन अनुमति दिन्छ। यसले टाढाको कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा फाईल ड्रप गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
जे होस्, यसको आवश्यकताको बावजुद, यो सफ्टवेयरको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको यो छ कि नयाँ संस्करणमा अद्यावधिक गर्दा तपाईंको प्रणाली ढिलो हुन सक्छ, र यसको व्यावसायिक संस्करण लागत ज्यादै उच्च छ। यसैले धेरै प्रयोगकर्ताहरू यी दिनमा टीमभ्युअर विकल्पहरूको खोजी गरिरहेका छन्।
तपाइँलाई TeamViewer विकल्पहरू किन चाहिन्छ?
नयाँ उपयोगकर्ताहरुका लागि, TeamViewer सफ्टवेयर कन्फिगर गर्न को लागी सजिलो छैन, जसले अझ धेरै सुरक्षा मुद्दाहरू सिर्जना गर्दछ। र यदि तपाइँको TeamViewer सफ्टवेयर सहि ढured्गले कन्फिगर गरिएको छैन भने, तब सम्भवतः तपाइँको प्रणाली जोखिमको लागि अति संवेदनशील हुन सक्छ। साथै, यदि तपाईं यो सफ्टवेयर व्यापार उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले त्यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ।
ठीक छ, यी कारणहरू टीमभ्यूवरको विकल्प खोज्नको लागि पर्याप्त छन्। त्यसो भए, हामी यहाँ TeamViewer का शीर्ष सात विकल्पहरू सारांश गरेका छौं, जुन सजीलो टाढाको कम्प्युटरहरू पहुँच गर्न सक्दछन्।
खोज्दै विन्डोज १० विद्यार्थी छुट? हाम्रो ब्लग सेक्शन बाट प्राप्त गर्नुहोस्।
TeamViewer विकल्प (२०२०) - शीर्ष Best सर्वश्रेष्ठ
यहाँ, हामीले कुल सात विभिन्न सफ्टवेयर समाधानहरूको मूल्याve्कन गरेका छौं जुन TeamViewer को सबल विकल्प हुन सक्छ। यस वैकल्पिक सफ्टवेयरले हरेक सेवा प्रदायकको लागि उत्तम रिमोट व्यवस्थापन उपकरणहरूको रूपमा काम गर्दछ। त्यसो भए धेरै समय खेर फालिएन, यी विकल्पहरूको बारेमा जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
यो TeamViewer को लागी एक उत्तम विकल्प हो किनकि तपाईं प्राथमिक अपरेटि systems प्रणाली मार्फत द्रुत र सीधा यसको पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, चाहे ट्याब्लेटहरू, ल्यापटपहरू, स्मार्टफोनहरू, र डेस्कटपहरू। HTML दर्शक पहुँच गरेर, २ than भन्दा बढी व्यक्तिको टोलीले एक पटकमा एक कम्प्युटरमा पहुँच गर्न सक्दछ।
यस बाहेक, प्रशासकले प्रयोगकर्तालाई द्रुत अनुमति दिन सक्दछ र सजिलैसँग स्वैप गर्दछ। यसले टेक्स्ट च्याटिंग, रेकर्डि,, ह्वाइटबोर्ड प्रकार्य, आदि जस्ता सहज अनलाइन बैठकहरूको लागि केहि प्रभावशाली सुविधाहरू पनि प्रस्तुत गर्दछ।व्यक्तिले १ 14 दिनको लागि डेमोमा पहुँच गर्न सक्दछ; यद्यपि यो अब स्वतन्त्र छैन। प्रयोगकर्ताहरूले users 48 र मासिक पाँच प्रयोगकर्तालाई लाइसेन्स दिन मासिक भुक्तानी गर्न अपेक्षा गरिन्छ।
२. सबै ठाउँमा डेमवेयर रिमोट
सबै ठाउँमा डेमवेयर रिमोट टीमभ्यूअरका लागि अर्को सबैभन्दा मूल्यवान विकल्प हो। यस सफ्टवेयरले म्याकोस एक्स, विन्डोज र लिनक्स कम्प्युटरमा टाढाको डेस्कटप समर्थन प्रदान गर्दछ। त्यसो भए हाम्रो विचारमा यो बजारमा उपलब्ध उत्तम रिमोट व्यवस्थापन सफ्टवेयर हो।सफ्टवेयरले विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्दछ किनकि यसले प्रशासकहरूलाई तुरून्त उनीहरूको सक्रिय डाइरेक्टरीमा प्रयोगकर्ताहरू थप्न र व्यवस्थापन उपकरणहरूमा पहुँच गर्न द्रुत अनुदान दिन अनुमति दिन्छ।
यस क्लाउड-आधारित सफ्टवेयर समाधानले सास उपकरणबाट प्रयोगकर्तालाई पहुँच र सहजता प्रदान गर्दछ। यद्यपि यो TeamViewer को लागी एक निःशुल्क विकल्प छैन, यो अझै तपाइँको लागि काम गर्न सक्दछ। यस बीचमा तपाई कम्प्युटरहरू टाढैबाट रिबुट गर्न सक्नुहुनेछ, एक क्लिक स्क्रीनशट लिन र यस सफ्टवेयरको सहयोगका साथ अन्त प्रयोगकर्ताहरूसँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाइँ लचिलो भुक्तानीको साथ टीम भ्यूवर विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने, त्यसो भए स्प्लासटपमा दायाँ हिट गर्नुहोस्। यो एक विश्वसनीय रिमोट डेस्कटप समाधान हो जुन तपाईलाई दुबै निःशुल्क र भुक्तान गरिएको संस्करणको रूपमा उपलब्ध छ।यो लिनक्स, म्याकोस एक्स, एन्ड्रोइड, विन्डोज, र आईओएस उपकरणहरू द्वारा समर्थित छ। यदि तपाईं सुरक्षा मुद्दाहरूको बारेमा केहि चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए आफ्नो चिन्ताहरू बिर्सनुहोस् किनभने यसले तपाईंको उपकरणहरूको पूर्ण सुरक्षाको लागि बहु डेटा ईन्क्रिप्शन स्तर प्रदान गर्दछ।
यद्यपि यस सफ्टवेयरमा विलम्बता कम छ। अझै, यो ती व्यक्तिहरूको लागि आदर्श विकल्प हो जसले धेरै अडियो र भिडियो स्ट्रिमिंग गर्छन्। पहुँच र रिमोट कन्ट्रोलको सहजता यो सफ्टवेयर समाधानको एक उत्तम सुविधाहरू मध्ये एक हो। यस भन्दा माथि, यो नि: शुल्क हो यदि तपाईं एकल प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। Splashtop शुल्क $ 60 वार्षिक।
Log. LogMeIn प्रो
यदि तपाईं प्राथमिक सम्झौताहरू जस्तै सुरक्षा सम्झौता नगरी विनियोजन र स्रोतको उपलब्धता अनुकूलनको लागि टीम भ्यूवरको विकल्प चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यो अनुप्रयोगको लागि जानु पर्छ।
LogMeIn प्रो उपकरण भनेको उत्तम क्लाउड सर्भर हो जुन स्पष्ट रूपमा तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। यो ठाउँको 1TB को साथ आउँछ, त्यसैले तपाईं यहाँ आफ्ना सबै फाईलहरू र अनुप्रयोगहरू बचत गर्न आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंको टोलीले तुरून्तै भण्डारणबाट फाइलहरू पहुँच गर्न सक्दछ यदि आवश्यक छ भने।
यसको माथि, व्यक्ति स्थानीय कागजातमा टाढैबाट उनीहरूको कागजातहरू प्रिन्ट गर्न स्वतन्त्र छ, विशिष्ट फाइलहरूसँग सजिलैसँग सहकार्य गर्न, र नियमित प्रभावशाली आईटी कार्यहरू स्वचालित रूपमा अन्य प्रभावशाली सुविधाहरूको साथ।
LogMeIn प्रोमा पहुँचको अर्को फाइदा यो हो कि यससँग उच्च सुरक्षा छ, जुन तपाईंले TeamViewer मा हराउनुहुनेछ। तपाईंको सत्र AES 256-bi ईन्क्रिप्शन र TLS १.२ यातायात संग सुरक्षित छ। यस बाहेक, सर्भर सार्वजनिक चाँडो पूर्वाधारको मद्दतले तुरून्त पहिचान पनि गरियो।
Chrome. क्रोम रिमोट डेस्कटप
हामीले परिचय अनुच्छेदमा छलफल गरेझैं टीमभ्युवर प्रयोग गर्ने प्रमुख समस्याहरू यसको जटिलता हो। तर अब तपाईंसँग क्रोम रिमोट डेस्कटपको रूपमा उत्तम विकल्प छ। यो सफ्टवेयर समाधान प्रयोग गर्नको लागि सीधा छ। तपाईलाई सबै चाहिन्छ तपाईको रिमोट कम्प्युटरमा गुगल क्रोम खोल्नको लागि। तपाईं तत्काल नियन्त्रण गर्न र तपाईंको नेटवर्क जोनमा पर्ने उपकरणहरूको अनुगमन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यदि तपाईं अपरेटि system प्रणालीको गतिको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ भने यो उत्तम छ। यसले क्रोम अपरेशनको गतिलाई असर गर्दैन। यो उपकरण मूल्य ट्यागको साथ आउँदछ र तपाईंलाई छोटो कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ। तपाईंले केही प्रकार्यहरू मिस गर्नुहुनेछ जस्तै भिडियो कलहरू, कुनै च्याटिंग छैन, र स्क्रिन सेयरिंग, जुन तपाईं माईकोगोमा हुनुहुन्छ। अझै, रिमोट उपकरणहरू पहुँच गर्न यो उत्तम हुनेछ।
We. Webex बैठकहरु
ठीक, Webex मीटिंग्स टीम भ्यूभरको सही विकल्प हो किनकि यो पनि उत्तम वेब कन्फरेन्सिंग उपकरण हो। यो क्लाउड-आधारित अनुप्रयोग हो जुन केहि सीमित ब्यान्डविथको साथ विभिन्न सिस्कोको क्लाउड सर्भरहरूमा फैलिएको छ। यस बाहेक, यस सफ्टवेयरमा क्यासि con कन्सेप्ट र ब्याक-अप पनि समावेश छ, अधिकतम उपलब्धता चाहनेहरू वितरण गरिएको र ठूलो टोलीका लागि यो उपकरण उत्कृष्ट बनाउँछ।
यद्यपि Webex को प्रीमियम प्याकेजले तपाईंलाई १०० पाहुनाहरूसँग वेब कन्फरेन्स सेट अप गर्न अनुमति दिँदछ। तपाईं प्रयोगकर्ताहरूको प्रोफाइल निजीकृत गर्न सक्नुहुनेछ, उनीहरूको आफ्नो अनुमतिहरूको सेटको साथ स्क्रीन साझेदारी।
यस बाहेक, तपाईंसँग पासवर्ड सुरक्षा पनि हुनेछ र टाढाका उपकरणहरू सजीलो पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, र माइक्रोसफ्ट आउटलुकको साथ एकीकृत गर्नुहोस्। तर यो अनुप्रयोगले तपाईलाई यसको नि: शुल्क संस्करणमा एक पटकमा केवल दुई प्रयोगकर्ताहरूसँग सम्मेलन गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसोभए, तपाइँ यसको पूरा उपकरणहरू पहुँच गर्न पूर्ण रकम तिर्न सोच्न सक्नुहुन्छ।
RE. REALVNC जडान
अन्तिममा कम्तिमा सूचीमा REALVNC जडान होईन। यो REALVNC मा सत्र र सुरक्षाको सर्तमा TeamViewer का लागी एक उत्तम विकल्प हो। यसले दुबै पासवर्ड सुरक्षा र ईन्क्रिप्शन प्रदान गर्दछ।यसले दुबै दर्शकहरूको पहुँच पहुँच गर्दछ तपाइँको कम्प्युटरबाट र सर्भर अनुप्रयोग स्थापना गरिएको कम्प्यूटरमा जुन तपाइँ नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ।
यस सफ्टवेयरको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यसलाई राउटर कन्फिगरेसनहरू र एक विशेष फायरवालको लागि आवाश्यक हुँदैन।यसको माथि, यो दुबै भुक्तान गरिएको र नि: शुल्क विकल्पहरूमा उपलब्ध छ। यदि तपाईं बढि उपकरणहरू पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले $$ around लगभग अलि बढी मूल्य तिर्नु पर्छ। यसका साथै तपाईले केहि मानक सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ जस्तै च्याट र डाटा ट्रान्सफर।
त्यसो भए, अब तपाईंसँग टिमभ्युअरको उत्तम विकल्पहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा टाढाको अर्को पीसीको साथ दूर जडान निर्माण गर्न स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। यी विकल्पहरूले टाढाका कम्प्युटरहरूमा पहुँच गर्न तपाईंको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न जाँदैछन्।
माईक्रोसफ्ट Minecraft रिमोटकनेक्ट त्रुटि फिक्स गर्नुहोस्
पोकेमोन सक्रिय प्रोमो कोड मा जानुहोस्
फिल्म तपाईं अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ
सिनेमा घर अनलाइन नि: शुल्क
विन्डोज १० का लागि bluestacks प्लेयर
अनलाइन फिल्म खरीद र डाउनलोड गर्नुहोस्